Muimbi Cde Chinx Anoshaya
Chikumi 17, 2017
Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Cde Chinx akashaya nezuro manheru kuchipatara cheWest End muHarare. Chinx ange ave nenguva yakareba achirwara nechirwere chegomarara.
Hurukuro naCde Chinx
Muimbi uyu akaberekwa kwaRusape musi wa 27 Gunyana 1955 achinzi Dickson Chingaira. Chinx akadzidza paChigora Primary School kuMakoni District kwaRusape asati aenda kuBulawayo. Achitaura neStudio 7 muna 2015, Chinx akati akatanga kuimba achiri mudiki muchechi yeAnglican nevabereki vake.
Muna 1975 Chinx akaenda kuMozambique kunorwara hondo yeChimurenga. Nekuda kwechipo chake chekuimba Chinx anoti akaimba neZanu-PF People’s Choir. Choir iyi yakazopihwawo zita rekuti Takawira Choir mukurangarira muchakabvu Leopold Takawira. Nziyo dzaiimbwa naChinx dzaisimudzira Chimurenga. Cde Chinx vanotiwo nziyo dzaiimbwa mukukunda nemurufu munguva yehondo iyi.
Muna Kubvumbi 1980 apo Zimbabwe yainge yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere, Cde Chinx vakaudza Studio 7 kuti: “Ini ndini ndakatotanga kunamura fogo”, zvichireva kuti ndivo vakaparura chirongwa chekuimba vamwe vaimbi vakaita saBob Marley naThomas Mapfumo vasati vauya kuzofadza vanhu.
Chinx anoti akaimba kambo, “Prince Charles” akanangana naPrince Charles kuti vaendese shoko kuna Mambokadzi Elizabeth kuti Zimbabwe yainge yawana kuzvitonga kuzere.
Cde Chinx vaigara vachiti nyaya yeminda yainge yakakosha zvikuru uye ndicho chikonzero chikuru chainge chafirwa nevarwi verusununguko. Pakatangwa nyaya yekutorera vachena ivhu muna 2000, Cde Chinx vakaimba nzimbo dzakaita sa”Hondo yeMinda” kukurudzira vatema kuti vatore minda.
Asi sevamwe varwiri vehondo yerusununguko Cde Chinx vaitiwo vainge voomerwa zvikuru nehupenyu uye vainge vokundikana kuzviriritira nemhuri yavo. Nekuda kwemabasa avakabata munguva yehondo uye nyika yawana kuzvitonga kuzere, vamwe vange vachikumbira kuti Cde Chinx vaitwe gamba renyika.
Chinx akaimba nevaimbi vakawanda zvikuru kusanganisa Bennie Miller na Keith Farquharson apo vakatsikisa nzimbo dzakaita sa”Ngorimba”, “Nerudo” uye “Zvikomborero”.
Vamwe vakazouya kuzobatana navo vanosanganisa muchakabvu Don Gumbo vakaumba Ilanga vakatsikisa mimanzi pakati pemakore a1982 kusvika 1987.
Vakaimbawo namuchakabvu Andy Brown uye Busi Ncube. Chinx akabva kuIlanga ndokumboimba oga asati aumba chikwata cheMazana Movement chakazonzi Mazana Black Movement. Chinx aimboitawo zvemitambo zvakapa kuti avewo mutambi mufirimu rinonzi “Flame” muna 1996.
Dzimwe nziyo dzaChinx dzakaita mukurumbira dzinosanganisa “Roger Confirm” uye “Vanhu Vose vemuAfrica”.